Bogga ugu weyn Sida Loo Bixiyo Deynta Kaadhka Amaahda Ah | Xeeladaha Ugu Fiican
Deynta kaarka amaahda waa mas'uuliyad aan la hubin oo ka dhalatay wareejinta amaahda kaarka deynta. Amaahiyayaashu waxay dhisi karaan deynta kaarka deynta iyagoo furaya koontooyin badan oo kaararka deynta oo leh shuruudo kala duwan iyo xadka deynta.
Ma waxaad tahay taageere weyn ee kaararka deynta? Ma rabtaa inaad barato siyaabaha ugu fiican ee lagu bixin karo deynta kaarka deynta?
Maqaalkani wuxuu ka hadlayaa xeeladaha ugu fiican ee aad qaadan karto si aad u bixisid deynta kaarka deynta si dhaqso leh. Si taxaddar leh u akhri!
Waa Maxay Deynta Kaarka Amaahda?
Investopedia wuxuu qeexayaa deynta kaarka deynta sida mas'uuliyad aan la hubin oo ka dhalatay wareejinta amaahda kaarka deynta. Amaahiyayaashu waxay dhisi karaan deynta kaarka deynta iyagoo furaya koontooyin badan oo kaararka deynta ah oo leh shuruudo kala duwan iyo xadka deynta.
Xafiisyada amaahda ayaa soo sheegi doona oo la socon doona dhammaan akoonnada kaarka deynta ee amaahda. Deynta kaarka amaahda ayaa sida caadiga ah lagu xisaabtamaa inta badan deynta ka maqan warbixinta amaahda amaahda sababta oo ah xisaabaadyadan ayaa soo noqnoqonaya oo sii furan oo aan xad lahayn.
Bixinta kaararka deynta ayaa bilaabatay 1950 -meeyadii, dheelitirka deynta qaranka ayaa si joogto ah u kordhay markii ay caan ku noqdeen. Macaamiisha ayaa gaadhay kaararka amaahda si ay u daboolaan kharashaadka, iyo deynta kaarka ayaa cirka isku shareeray ka dib markii Xeerka Ilaalinta Musuqmaasuqa ee 2005 uu dadka ku adkeeyay in ay xareeyaan kicitaan.
Deynta kaarka amaahda ayaa si xun kuu saamayn karta siyaabo dhowr ah sida yareynta lacagtaada score credit, yaraynta socodka lacag caddaan ah, oo kugu kici doona lacag dulsaarka dulsaarka oo keliya.
Khadadka dhow ee soo socda, waxaan ku tusi doonaa xeeladaha ugu fiican ee aad qaadan karto si aad si dhakhso leh iskaga bixiso deynta kaarka deynta.
Akhri ALSO: Waxaan haystaa Dhibco Dhibco oo Xun, Beddel Kaararkan Deynta ah
Maxaa Keena Deynta Kaarka Amaahda?
Dadku waxay ku qaataan deynta kaarka deynta sababo kala duwan awgood, laga bilaabo kharashaadka shucuurta ilaa iibsiyada dhabta ah ee ku saleysan baahida.
Sida laga soo xigtay Kaydinta Federaalka, Ameerikaanku waxay aruursadeen in ka badan $ 1 tiriliyan deynta kaarka deynta ee aadka u wanaagsan - rikoor aad u sarreeya. Sanadkeeda Xaaladda Daraasadda Dhibcaha, Experian ayaa soo werisay in celceliska Ameerika uu wato $ 6,354. Haddaba, su’aashu waxay tahay, maxaa keenaya deynta intaas le’eg?
Sida dhaqaalaha ayaa si joogto ah u soo hagaagayay laga soo bilaabo Hoos -u -dhacii Weynaa ee 2008, macaamiisha ayaa aad uga nasanaysa kharashaadka. Kuwo badan waxay u jeestaan ​​kaararka amaahda waxyaabo ay ka mid yihiin fasaxyada, dukaamaysiga, iyo kharashyada nolol maalmeedka, iyagoo dareemaya kalsooni inay jirto suurtogalnimo xooggan oo dib u bixinta dheelitirka.
Akhri ALSO: Sida Loo Joojiyo Lacag -bixinta Nolosha Jeega Jeega | Waad ku farxi doontaa inaad tan aragto
2. Maaliyad degdeg ah oo degdeg ah
Kharashaadka lama filaanka ah, sida dayactirka guriga ama baabuurka, ayaa curyaamin kara. Mushahar dhimis, shaqo lumis, ama naafonimo ku meelgaar ah ayaa dhammaantood keeni kara khasaare dakhli, taas oo u fudud in la maareeyo haddii aad leedahay shabakad badbaado maaliyadeed. Si kastaba ha noqotee, iyada oo aan la helin sanduuq degdeg ah, dad badan ayaa lagu qasbay inay isticmaalaan kaarka deynta si ay u daboolaan kharashyadan.
Celceliska kharashka dayactirka iyo dayactirka guud ee guryaha Mareykanka waa qiyaastii $ 170 bishii. Tani uma muuqan karto wax badan, laakiin qaar badan oo iibsadayaasha guryaha ah ayaa markii hore ilooba inay miisaaniyad u bixiyaan kharashyadaas oo ay aakhirka u fidiyaan dhaqaalahooda xadka.
Akhri ALSO: 15 Caado Oo Keeni Doonta Inaad Lacag La'aan Ku Noqotid 2021
3. Kharashyada caafimaadka
Kharashka daryeelka caafimaad ayaa kor u kacay waqti ka dib, iyada oo shirkadaha caymiska caafimaadku bukaanka ka doonayaan in ay jeebka ka bixiyaan lacag badan. Kaararka amaahda ayaa ah habka kaliya ee dadka qaar ay ku bixin karaan hababka caafimaad ee qaaliga ah laakiin lagama maarmaanka ah.
Furriinku wuxuu ku kici karaa ilaa $ 20,000 celcelis ahaan gobollada qaarkood, lammaaneyaal badanna waa inay ku maalgeliyaan kala qaybsanaantooda kaarka deynta. Intaas waxaa sii dheer, cidhiidhiga maaliyadeed ee ka dhashay dakhli lumis ayaa ku qasbi karta qoys ama shaqsi inay ku tiirsanaadaan kaarka deynta.
5. Samaynta kaliya lacagta ugu yar
Marka la tixgeliyo dulsaarka, bixinta ugu yar waxay yareysaa dheelitirka kaarka deynta ee bil kasta qadar yar. Sii wadida iibsashada inta kaliya ee aad bixinayso waxa ugu yar ayaa sii xumaynaysa xaaladda waxayna u abuuraysaa duufaan kaamil ah deynta kaarka deynta.
6. Dayactirka iyo dayactirka baabuurka
Saamaynta dhaqaale ee lahaanshaha baabuur way ka adag yihiin deymaha baabuurta ee billaha ah iyo lacagaha caymiska baabuurka. Kahor intaadan iibsan baabuur, hubso inaad sidoo kale miisaaniyad u yeelato gaaska, diiwaangelinta iyo khidmadaha baarkinka, iyo dayactirka iyo dayactirka.
Post laxiriira: Ma iibsan karaa baabuur leh kaarka deynta? Sida Loogu Sameeyo Taas Waqti Yar
Sababta Deynta Kaadhka Amaahdu Aad Khatar U Tahay
Qaadashada caadooyinka maaliyadeed ee wanaagsan, sida miisaaniyadda iyo kaydinta, ma aha oo kaliya inay kaa caawiso inaad iska ilaaliso deynta kaarka deynta oo dheeraad ah laakiin waxay sidoo kale ku siinaysaa awood aad ku bixin karto deyntaada hadda taagan si wanaagsan.
Isticmaalka kaararka deynta oo aadan bixin bil kasta waxay dhaawici kartaa deyntaada. Dhibaatooyinka ugu waaweyn ee adeegsiga amaahda marka aadan haysan lacag caddaan ah oo aad gadaal iska bixiso-marka laga reebo dulsaarka qaaliga ah-waxaa ka mid ah dhaawaca dhibcahaaga, xumaynta xiriirka qoyska iyo saaxiibbada, iyo ugu dambayn Burburinta.
Waa kuwan dhowr sababood oo ah inaad ka fogaato deynta kaarka deynta:
1. Amaahdu waxay dhiirigalisaa is-xakamaynta
Dabeecadda wax iibsi aan raalli ahayn oo inta badan ka dhalata kalsoonida kaararka deynta ayaa ah mid kordhisa rabitaanka qofka inuu is-xakameeyo.
Dabeecadda wax-iibsiga ee aan rabitaanka lahayn waxay saamayn taban ku yeelan kartaa dhinacyada kale ee noloshaada, sida isku-kalsoonaanta, ku-xadgudubka mukhaadaraadka, iyo xiriirka dadka dhexdooda ah. Haa, xakamaynta jimicsigu waa mid adag oo caajis ah, laakiin sidoo kale waxay leedahay faa'iidooyin iyo faa'iidooyin badan, sida kartida lagu gaari karo yoolal maaliyadeed, sida iibsashada guri.
Akhri ALSO: Xisaabaadka Bangiga ugu Fiican Dhallinyarada Xiisaha Badan | 2021
2. Ma bixisid waxaad kartid
Lahaanshaha kaarka amaahda waxay keenaysaa waajibka ah in aad biilkaaga si buuxda u bixiso bil kasta si looga fogaado in lagu bixiyo kharashyo dheeraad ah oo dulsaarka dulsaarka ah, oo kaliya u adeegaya in lagu dheereeyo deyntaada.
Kuwa ay u badan tahay inay la kulmaan xannibaadyo marka ay bixinayaan biilasha kaarka deynta sababta oo ah hubin la'aanta coronavirus ee hadda jirta, ka fiirso kaarka wareejinta dheelitirka oo aan lahayn wax lacag ah si aadan dulsaar ugu yeelan deyntaas.
3. Qiimayaashu Waxay Kici Karaan Hadhaag La Bixin La'yahay
Waxaa taas ka sii daran, heerka boqolleyda weyn ee sanadlaha ah (APR) ee aad u malaysay inaad ku haysato kaarkaaga amaahda ayaa laga yaabaa inuu ahaa qiime hordhac ah oo kordhaya haddii dheelitirka aan la bixin si buuxda. Natiijo ahaan, 8% APR ayaa si sahal ah cirka ugu kici karta ilaa 29 boqolkiiba marka ilbidhiqsi.
In kasta oo inteenna badani aanay rumaysan doonin tan, haddana suurtogalnimadu weli waa suurtogal.
4. Ribadu Waa Qaali
Is-xakamaynta aad bay uga jaban tahay dulsaarka been-abuurka ah ee kaararka deynta. Halkii aad ku qaadan lahayd dulsaarka 18% wax qiimahiisu yahay $ 1,000, waxaa fiican inaad iska xakameyso inaad iibsato ama si ka sii fiican aad weli u keydiso
Tusaale ahaan, haddii aad wax ku iibsato $ 1,000 adiga oo adeegsanaya kaarka deynta oo leh 18% dulsaar ah oo aad bixisid lacagta ugu yar bil kasta, waxaad ku dambayn doontaa bixinta $ 175 oo dulsaar ah oo weli lagugu leeyahay $ 946 iibsigaaga hal sano kadib.
5. Waxay u horseedi kartaa Musalafnimo
Sida ku cad qodobkan Investopedia, haddii aad dhowr jeer qarash garayso adiga oo aan lahayn qorshe aad ku bixisid, ama haddii qorshahaagu xumaado sababta oo ah waxaad weyday shaqadaada ama waxaa kugu dhacay biilasha caafimaadka, waxaad nasiibdarro ku arki doontaa naftaada rajo la'aan deyn ah. Shaacinaya Burburinta waxay dhaawici doontaa taariikhdaada amaahda illaa 10 sano, oo marka ugu dambaysa ee warbixinta meesha ka baxdo, waa inaad mar kale dhistaa sumcad wanaagsan
Maxaan U Bixinayaa Deynta Kaarka Amaahda?
Waxaa jira dhowr sababood oo wanaagsan oo lagu bixin karo deynta kaarkaaga deynta sida ugu dhaqsaha badan:
1. Sii dulsaar yar
Bixinta kaararkaaga deynta ayaa kaa badbaadin doonta lacag badan oo dulsaar ah. Iyada oo ku xidhan deyntaada iyo dulsaarkaaga, waxaad ku dambayn kartaa inaad keydiso lacag aad u badan waqti kadib. Taasi waa muhiim, fikradayada.
2. Waxay hoos u dhigtaa cadaadiska
Lahaanshaha deynta kaarka deynta ayaa awood u leh inay kaa walwalaan. Waa inaad xasuusnaataa inaad bixiso biilasha, aad uga xanaaqdo khatarta ay ku leedahay amnigaaga maaliyadeed oo ugu dambayn qorshayso maalmo aad ku bixinayso deynta kaarka deynta. Arrimaha walbahaarka waa kuwo aan dhammaad lahayn. Bixinta kaararkaaga ayaa kaa caawin doonta yareynta culeyskaas.
ARAG SIDOO KALE: Sida Loo Noolaado Shaqo La'aan & Biilasha Bilaa Cadaadiska 2021
3. Helitaanka Badbaadada Maaliyadeed
Deynta kaarka amaahda waxay khatar weyn ku tahay amnigaaga maaliyadeed. Waxay kaa horjoogsataa inaad si fiican uga faa'iidaysato dakhligaaga. Lacagta lagu bixiyay bixinta kaarka deynta waxaa loo kaydin karaa maalin roob, xaalad degdeg ah, kulliyadda carruurtaada, iwm. Bixinta kaararkaaga deynta ayaa kuu soo dhoweyneysa hal talaabo oo ku dhow amniga maaliyadeed.
4. Hagaaji Dhibcahaada Deynta
Markay timaado dhibcaha dhibcahaaga, mid ka mid ah qodobbada ugu muhiimsan ee la tixgeliyo ayaa ah adeegsiga amaahda. Qadarka deyntaada ee la xiriirta xadkaaga amaahda waxaa lagu tilmaamaa adeegsiga amaahda. Waxaa lagu talinayaa in tiradani ka hooseyso 30%. Markaad bixinayso kaararkaaga deynta, dhibcahaaga isticmaalka ayaa hoos u dhici doona, taas oo hoos u dhici doonta hagaaji dhibcahaaga amaahda.
5. Kordhi dakhligaaga mustaqbalka
Markaad u oggolaato deynta inay ku ururto kaararka amaahda, ugu dambayntii waxaad naftaada ka qaadaysaa lacag mustaqbalka. Sidaa darteed, waxay noqon doontaa dantaada ugu fiican Haddii aad hadda bixiso deynta kaarkaaga deynta. Waxay kaa dhigi doontaa inaad yeelato lacag badan, hadhow, kordhiso dakhligaaga mustaqbalka iyo amniga maaliyadeed.
6. Ku darso Qorshahaaga Hawlgabka
Markaad lahayn deyn kaarka deynta oo kugu filan, way kuu sahlan tahay inaad lacag u kaydsato hawlgab ama waxyaalo kale oo adiga muhiim kuu ah iibsashada guri cusub iyo dhammaan.
7. Yaree Tirada Biilasha Aad Bixiso
Dhammaanteen waan ognahay in tani ay caddahay, laakiin marka ay timaado deynta kaarka deynta, dad badan ayaa ku guuldareysta inay arkaan waxa muuqda. Waxaad yeelan doontaa biilal yar oo aad bixiso bil kasta haddii aad bixiso deynta kaarkaaga deynta.
Xeeladaha Ugu Fiican Ee Lagu Bixiyo Deynta Kaarka Amaahda
Haddii aad leedahay deynta kaarka deynta oo madaxaaga sudhan, waxaa jira siyaabo badan oo wax looga qaban karo. Habka adiga kugu habboon wuxuu ku xiran yahay inta deyn ah ee aad leedahay, taariikhdaada deynta, iyo waxa kaa caawin doona inaad dhiirrigeliso si aad uga sii fogaato deyntaada - xitaa haddii aad dareento inaad quusanayso. Halkan waxaa ah dhowr xeelado la tijaabiyey si loo bixiyo deynta kaarka deynta.
#1 Barafka barafka
Barafka barafka ee deynta ayaa ah istaraatijiyad bixinta kaarka deynta oo ay tahay inaad ku qorto dheelitirka kaarkaaga deynta ee kuu gaarka ah si gaar ah. Waa inaad koontada dheelitirka ugu hooseeya dhigtaa xagga sare ee liiska deymaha. Kadib, adiga oo ku salaynaya hadhaaga lagugu leeyahay, ka dalbo xisaabaadka haray kuwa ugu hooseeya ilaa kuwa ugu sarreeya.
Tiro khubaro maaliyadeed iyo deyn ah ayaa qaba fikirka ah in marka hore bixinta deynta ugu yar ay tahay habka ugu wanaagsan ee macaamiisha u bixin karaan deynta kaarka deynta.
#2 Qulqulka deynta
Istaraatiijiyad lacag bixin kale oo kaarka deynta ah oo lagaa rabo inaad ku qorto isu -dheelitirka kaarkaaga amaahda si gaar ah ayaa ah qulqulka deynta. Dhinaca kale, habkani wuxuu ku saleeyaa taxanaha bixinta deyntaada dulsaarkaaga - ugu sarreeya ilaa kan ugu hooseeya.
Sida habka kubbadda barafka ee deynta, waxaad ku bixinaysaa lacagta ugu yar dhammaan akoonnadaada marka laga reebo kaarka deynta ee booska ugu horreeya ee lacag -bixinta. Iyada oo la wajahayo qulqulka deynta, kani waa kaarka leh APR -ga ugu sarreeya. Markaa waxaad bixinaysaa intaad awooddo bil kasta ilaa aad ka bixisid kaarka dulsaarka ugu sarreeya.
Markaad bixiso lacagtaada koontada ugu dulsaarka badan, duub lacagtii aad ku bixinaysay deyntaas bil kasta kuna dabaq kaarkaaga dulsaarka labaad. Ku celi ilaa dhammaan xisaabaadkaagu leeyihiin dheelitir eber ah.
Akhri ALSO: Imisa Jeegaaga Mushaharka ah ayay tahay inaad isla markiiba keydiso?
#3 Bixi lacag bille ah oo dheeraad ah
Waxaa laga yaabaa inaad u baratay wareegyada biilka billaha ah, laakiin maahan inaad sugto ilaa taariikhda bixinta lacag bixinta si aad u bixiso qayb ka mid ah dheelitirkaaga, oo kuma koobna inaad sameyso hal lacag bil kasta.
Dulsaarka kaarka amaahda ayaa la isku daraa maalin kasta, kharashyada maaliyadeedna waxaa lagu xisaabiyaa iyadoo lagu saleynayo isku dheelitirka maalinlaha ah ee koontadaada. Taas micnaheedu waa inaad bixin doontaa khidmado dulsaar badan maalin kasta oo aadan bixin.
Si taas loo gaaro, haddii lagu siiyo mushahar labadii toddobaadba mar ama labadii biloodba mar, in aad laba lacag bixin bishiiba waa suurtogal; haddii marar badan lagu siiyo mushahar-dheh, waxaad heshaa mushahar toddobaadle ah ama waxaad tahay shaqaale tilmaamaya-waxaa laga yaabaa inaad ku booddo inaad bilowdo qorshaha maaraynta deynta adiga oo bixinaya toddobaadle.
#4 Amaah isugeynta kaarka deynta
Amaahda shaqsiyeed ee isku -darka deyntu waxay isu -gaynaysaa dheelitirka xisaabaadka badan ee hal deyn oo leh hal bil -bixin - sida ugu fiican, dulsaar hoose. Waxaad u isticmaashaa lacagaha amaahda si aad uga bixisid dheelitirka kaarkaaga deynta, ka dibna aad bil kasta ku bixisid deynta shaqsiyeed.
Sababtoo ah dulsaarka dulsaarka kaarka deynta badiyaa wuu ka sarreeyaa qiimayaasha lagu soo dallacayo amaahda shaqsiyeed, gaar ahaan haddii aad leedahay deyn wanaagsan, deynta isku -darka deynta ayaa fududeyneysa dhaqaalahaaga. Halkii aad bixin lahayd lacago badan bil kasta, waxaad u baahan tahay inaad samayso mid keliya dhammaan deymaha la isku daray.
Post laxiriira: 10 Deyn Ganacsi Oo U Fiican BadCredit
#5 Hel kaarka deynta wareejinta dheelitirka
Haddii aad leedahay dhibco dhibco oo wanaagsan, waxaa laga yaabaa inaad awoodo inaad hesho kaar kaa caawin doona inaad deyntaada si degdeg ah u bixiso.
Kaararka amaahda wareejinta dheelitirka ayaa sida caadiga ah bixiya 0% qiimayaasha APR ee hordhaca ah muddada xayeysiinta ee 12 illaa 18 bilood. Xilligaan hordhaca ahi wuxuu ku siinayaa daaqad fursad aad deyntaada si dhakhso ah uga bixin karto: Maadaama aadan bixin dulsaar, dhammaan lacagtaada billaha ah waxaa lagu dabaqayaa maamulaha. Si kastaba ha ahaatee, ka dhig mid mudnaan leh inaad iska bixiso dheelitirkaaga ka hor inta muddada xayeysiinta aysan dhicin, gaar ahaan haddii heerka APR ee aan hordhaca ahayn uu sarreeyo.
#6 Adkee miisaaniyaddaada si loo yareeyo kharashaadka
Cidina ma rabto inay maqasho, laakiin mid ka mid ah siyaabaha ugu fudud ee si dhakhso ah deynta looga bixin karo ayaa ah inaad lacag badan u dhigto bil kasta. Tan waxaa ka mid ah in la helo habab cusub oo lacag loo keydiyo, sida tirtirka telefishanka fiilada ama yaraynta tirada habeen ee aad dalbato qaadashada. Markaad bixin karto wax ka yar kan ugu yar biilasha kaarkaaga deynta, waxaad hal talaabo u dhowdahay xorriyadda deynta.
Deynta kaarka amaahda ayaa si dhaqso ah u ururin karta, ha ahaato mid ka dhalatay kharashyada caafimaad ee aan la filayn, kharash degdeg ah, ama iibsashada maalin kasta. Dad badan ayaa qaata deynta kaarka deynta iyagoo adeegsanaya kaararkooda amaahda si ay u maalgeliyaan iibsiyo waaweyn oo aysan awoodin isla markiiba.
Kaararka amaahdu waxay yeelan karaan dulsaar sare, iyadoo ku xiran dhibcaha dhibcaha iyo taariikhda maaliyadeed, taasoo adkeyneysa bixinta deynta mustaqbalka haddii ugu yaraan aan la bixin lacagtii ugu yareyd. Oo haddii aad adigu mas'uul ka tahay lacag -bixinno habaysan, sida deyn shaqsiyeed ama lacag -bixin amaah arday, deynta kaarka deynta ayaa hoos ugu dhici karta liiska mudnaanta oo weynaan karta.
forbes.com - Xeeladaha Bixinta Kaarka Amaahda: Maxay Baaritaanku Sheegaysaa?
bankrate.com - 6 siyaabood oo lagu bixin karo deynta kaarka deynta
Investopedia.com - 9 Sababood oo Loogu Diido Maya Deynta
creditkarma.com - Sida dhakhso ah loo bixiyo deynta kaarka deynta
lacag.com - 6 Siyaabood oo Loo Bixiyo Deynta Kaarka Amaahda Degdegga ah
creditguard.org - Tobanka Sababood ee Ugu Sarreeya ee Lagu Bixiyo Deynta Kaarkaaga Deynta
Maamul Koontadaada Kaarka Amaahda ee Amazon | Dib u Eegid Buuxda
Sidee Shirkadaha Kaarka Deynta Loogu Sameeyaa Lacag? Waxaan haynaa 5 Siyaabood oo la Xaqiijiyay
Sida loo hubiyo in Kaarka Amaahdu uu shaqeynayo | Hagaha Tallaabo-Tallaabo ee 2021
15 Kaararka Amaahda Birta Ugu Fiican Sanadka 2021
Sida Loogu rakibo Barnaamijyada Xisbiga 3aad Samsung Smart Tv | Tilmaan Buuxo
Samsung Smart Tv waa hal TV oo leh xulashooyin badan oo madadaalo ah oo kuu dhexeysa moodada, isboortiga,…
Marka ay timaado dhaqaalahaaga, qorsheynta mustaqbalka waxaa laga yaabaa inay kugu adkaato inaad keligaa sameyso.
SIDA AAD NAFTAADA U Istaagto WAkhtiyada Tijaabinta: 15 WART SMART.
Oh, Ilaaha (abuuraha, Caalamka), waxaan rabaa inaan ku dhasho X taariikhda waalidiinta Y iyo Z ee…
Mararka qaarkood waxay qaadataa masiibo caalami ah iyo hoos u dhac si ay nooga dhigaan sida ay muhiim ugu tahay miisaaniyadayntu. Haddii…